COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်နေသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ နှင့် ပရဟိတအသင်းများမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကြံပြုတင်ပြခြင်း အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်
နေပြည်တော်၊ (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၄) ရက်
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် ယနေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် Videoconferencing စနစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်နေသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပရဟိတအသင်းများမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်း များကို ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကြံပြုတင်ပြခြင်း အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် -
• ယနေ့ တွေ့ဆုံမှုသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပရဟိတအသင်းများကိုသာမက နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်နေသူအားလုံးအား ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူများကိုယ်စား ဂုဏ်ပြုအသိအမှတ်ပြုကာ ကျေးဇူးတင်ရှိ ပါကြောင်း၊
• စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေသူအားလုံးသည် COVID-19 ဆိုင်ရာ အသွားအလာ ကန့်သတ်ရာနေရာများ၊
. အနံ့ပျောက်လက္ခဏာရှိသူများထားရှိရာနေရာများ၊ COVID-19 ကုသရေးဌာနများနှင့် ဆေးရုံများတွင်လည်းကောင်း၊ လူနာနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူများအား ရှာဖွေထောက်လှမ်းရာတွင်လည်း ကောင်း၊ COVID-19 သံသယလူနာများနှင့် လူနာများအား သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်လည်းကောင်း အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းများတွင် မိမိ၏ကိုယ်ကျိုးမပါဝင်သော်လည်း မိမိ၏ကိုယ်ပိုင် အရေးကိစ္စ သဖွယ် စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊
• ဤအဖွဲ့များ၏ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ချက်များသည် ဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 ထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စေရန်အတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပြီး အရေးကြီးပါကြောင်း၊
• ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 လုပ်ငန်းများစွာကို ပါဝင်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်နေသည့် အသင်းအဖွဲ့များ များပြားသဖြင့် လုပ်ငန်းများပိုမို၍ ချိန်သားကိုက် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ ပိုမိုထိရောက်စေရန်၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ထပ်မနေစေရန်နှင့် လိုအပ်သည်များကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ပိုမိုပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်တို့အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းပြီး သုံးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း၊
• COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုပုံသဏ္ဌာန်၊ ရောဂါပိုး၏ သဘောသဘာဝအခြေအနေ၊ မိမိတို့တွင် ရှိသော အရင်းအမြစ် စသည့် ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသော အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
• COVID-19 ကဲ့သို့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှ တစ်ဆင့်ကူးစက်ပြီး လျင်မြန်စွာကူးစက်ပျံ့နှံ့သော ကပ်ရောဂါကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရာတွင် လျင်မြန်စွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ကာ တုံ့ပြန်ချက် သည် အထူးအရေးကြီးသဖြင့် မှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရရှိစေရန် မိမိတို့ကြိုးစားလျက်ရှိပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး စနစ်တကျချိန်သားကိုက် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊
• အစွမ်းထက်မြက်သော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးပေါ်ထွက်လာပြီး လူဦးရေအများစုမရရှိခင် အချိန်အထိ COVID-19 ကူးစက်မှု ဒုတိယလှိုင်း၏နောက်တွင်လည်း ကူးစက်မှု လှိုင်းငယ်များရှိလာနိုင် ပါကြောင်း၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းများကို မိမိအရေးကဲ့သို့ သဘောထားကာ တိကျစွာလိုက်နာပါက အဆိုပါ လှိုင်းများ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ဖြစ်ပွားမှု ဝေးကွာပြီး မကြီးမားနိုင်ပါကြောင်း၊
• COVID-19 သည် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင်သာမက လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးစသည့် ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးကိုပါထိခိုက်စေခြင်းဖြစ်သဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းများကို အလေးထား လိုက်နာကြရန် အထူးအရေးကြီးပါကြောင်း၊
• ဤ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အမြဲဆန်းစစ်သုံးသပ်ကာ အထိရောက်ဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးစားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကဏ္ဍအမျိုးမျိုး၌ ကူညီလျက်ရှိသည့်ဆောင်ရွက်ချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ အမြဲတမ်းသိရှိသုံးသပ်၍ လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းပံ့ပိုးကူညီရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• ဤအသင်းအဖွဲ့များ၏ ယခု COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးတွင် အဘက်ဘက်မှ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ချက်များကို အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီက ပြုစုရေးသား၍ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့စေလိုပြီး ဝန်ကြီးဌာနက စုစည်း၍ မှတ်တမ်းတင် စာအုပ်ထုတ်ဝေသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• ယနေ့တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်လာကြသူများအနေဖြင့် လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ၊ ဝန်ကြီးဌာနမှ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ် သည်များအား ပွင့်လင်းစွာဖြင့် ပြောကြားကြစေလိုပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် We Love Yangon အဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နန့်စုရွှေစင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများအသင်းချုပ်မှ ဦးသက်ကိုကို၊ မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းချုပ် (ဗဟို)မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဖြိုးကိုကိုဆွေ၊ ဗဟိုပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးဆန်းလင်းဦး၊ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်နေသူ ဦးဖြိုးသုခ၊ Myanmar Christian Council ၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးသာရှီး၊ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဦးဆောင်သူ ဦးဝေဠုကျော်၊ Golden Middle Way အဖွဲ့ မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သော်၊ Skynet Oxygen Donor and Volunteer အဖွဲ့မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်ရေးရာကော်မတီ မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးဒီငြိမ်းလင်း၊ Clean Yangon အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်သဉ္ဇာအေး၊ Volunteer for COVID-19 အဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ ဦးရန်နောင်ထွဋ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်ရေးရာ ကော်မတီ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီမှ တာဝန်ခံ ဦးနေမျိုးထွန်း၊ လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ (ရန်ကုန်) ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးမိုးညိမ်းနှင့် ဇာမနီ (မြန်မာ) COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှ Coordinator ဦးသန့်စင်တို့က -
• သက်ဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့အလိုက် COVID-19 ဆိုင်ရာ အသွားအလာကန့်သတ်ရာနေရာများ၊ အနံ့ပျောက်လက္ခဏာရှိသူများထားရှိရာနေရာများ၊ COVID-19 ကုသရေးဌာနများနှင့် ဆေးရုံ များတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ အောက်ဆီဂျင်ပိုက်လိုင်းများတပ်ဆင်ခြင်းအပါအဝင် COVID-19 ကုသရေးဌာနများနှင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် အဆောက်အဦ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ အစားအသောက် များနှင့် အသုံးအဆောင်များ ပံ့ပိုးပေးခြင်းများကိုလည်းကောင်း၊
• လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ (report) များအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ လစဉ်ပေးအပ်နေမှုကိုလည်းကောင်း၊
• အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းများတွင် ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုလုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း၊
• လူနာနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူများအား ရှာဖွေထောက်လှမ်းရာတွင်လည်းကောင်း၊
• COVID-19 သံသယလူနာများနှင့် လူနာများအား လူနာတင်ယာဉ်များအပါအဝင် ယာဉ်အမျိုးမျိုးဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်လည်းကောင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှုများကို အသီးသီး ပြောကြားခဲ့ကြပြီး၊
• စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအောက်ရှိ ဈေးများတွင် COVID-19 ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမှုရှိသော်လည်း ရပ်ကွက်များအတွင်းရှိ ပျံကျဈေးများတွင် စည်းကမ်းလိုက်နာမှု များ အားနည်းနေမှု၊
• စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူနာတင်ယာဉ်များအတွက် စက်သုံးဆီများ လိုအပ်မှု၊
• ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ရရှိသူ COVID-19 လူနာများနှင့် အခြားသော လူနာများအား လူနာနေထိုင်ရာနေရပ်သို့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရာတွင် အချို့မြို့နယ်များ က ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုခြင်းများရှိနေမှု၊
• စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက် N95 Mask များနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသုံးရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံများအား ဝန်ကြီးဌာနမှ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိမှုကို ပိုမို၍ ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်မှု၊
• စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များက ရရှိသော လှူဒါန်းငွေများဖြင့် တစ်ကိုယ်ရေသုံးရောဂါကာကွယ်ရေး အသုံးအဆောင်များဝယ်ယူရာတွင် ဝန်ကြီးဌာနမှ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
• စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူနာတင်ယာဉ်များတွင် အောက်ဆီဂျင်အိုးများ ထပ်မံတိုးမြှင့်ထည့်သွင်းရန်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနမှ ပံ့ပိုးပေးရန်၊
• စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် အသွားအလာကန့်သတ်မှု (quarantine) ခံယူရန်အတွက် နေရာများ ထပ်မံဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
• လူနာများအတွက်သာမက စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက်ပါ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန်၊
• လူနာတင်ယာဉ် အသင်းအဖွဲ့များမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက် လက်ရှိတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးအပ်လျက်ရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် သင်တန်းများကို ပိုမို ကျယ်ပြန့်စွာ ပေးအပ်ရန်၊
• စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ နှင့် ပရဟိတအသင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ Videoconferencing စနစ်ဖြင့် ပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရန် တို့ကို ပြောကြားခဲ့ကြကာ
• ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် လူနာတင်ယာဉ်များ ကွပ်ကဲရေးဌာနကို ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ထားရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရေးအတွက် အကြံပြုချက်များ ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်။
• စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွင် N95 Mask များနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသုံးရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံများ ပိုမိုပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• အောက်ဆီဂျင်များလိုအပ်မှုကိုလည်း ဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား Rapid Antigen Test Kit များဖြင့် COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးပေးလျက်ရှိပြီး ပိုမိုတိုးမြှင့်စစ်ဆေးပေးရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များကရရှိသော လှူဒါန်းငွေများဖြင့် တစ်ကိုယ်ရေသုံးရောဂါကာကွယ်ရေး အသုံးအဆောင်များဝယ်ယူရာတွင် ဝန်ကြီးဌာနမှ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးရန်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိနှင့် သက်ဆိုင်ရာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့တို့ ယနေ့၊ နေ့လယ်တွင် အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း က -
• ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သော ကိစ္စရပ်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနအတိုင်းအတာဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် ကိစ္စရပ်များကို အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းမြင့် က -
• စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ နှင့် ပရဟိတအသင်းများအပါအဝင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက် နေသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊
• လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အားနည်းချက်နှင့် လစ်ဟာမှုများရှိပါကလည်း စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ဝိုင်းဝန်း၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်များကို ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကာ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် -
• ယနေ့တက်ရောက်လာသူများ၏ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များအရ ပရဟိတလူမှုရေးအသင်းများသည် ငွေကြေးအားဖြင့်လည်းကောင်း၊
. ပစ္စည်းကိရိယာအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ လုပ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပံ့ပိုးမှုများသည် အထူးများပြားပြီး လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကဏ္ဍလည်း စုံလင်များပြားပါကြောင်း၊
• ယခုကဲ့သို့ COVID-19 ကာလအတွက် သာမက ရေရှည်အတွက်ပါ အကြံပြုချက်များ ပေးအပ်ခြင်းကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊
• ပရဟိတစေတနာ့ဝန်ထမ်းများက COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအပြင် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေခြင်းသည် ကြွက်၊ ခြင်၊ ယင်၊ ရေဆိုးရေညစ် တို့မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• ဤအသင်းအဖွဲ့များနှင့် အလှူရှင်များ၏ အောက်ဆီဂျင်ပိုက်လိုင်းများတပ်ဆင်ခြင်းအပါအဝင် ဆေးရုံကြီးများ အဆင့်မြှင့်တင်ပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများသည် ယခု COVID-19 အတွက် သာမက ရေရှည်တွင် နောင်လာနောက်သားများအတွက် များစွာ အကျိုးရှိစေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုစနစ်ကောင်းတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာရေးသည် ရေရှည်တွင် အရေးကြီးသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအား စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူနာတင်ယာဉ်အဖွဲ့များနှင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်စေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• လူနာတင်ယာဉ် အသင်းအဖွဲ့များမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် သင်တန်းများကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာပေးအပ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• မိမိအနေဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူနာတင်ယာဉ်များအတွက် စက်သုံးဆီလိုအပ်ချက် အပါအဝင် ယနေ့တင်ပြသော ကိစ္စရပ်များအား "ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့" ၏ နေ့စဉ်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ကာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• အသင်းအဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ (report) များ အပါဝင် သတင်းအချက်အလက်များကို သုံးသပ်ကာ လိုအပ်သလို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အား နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသို့ စေလွှတ်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊
• ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံများနှင့် ပူးပေါင်း၍ COVID-19 ရောဂါရှာဖွေမှုနှင့် ကုသမှုလုပ်ငန်းများကို မကြာမီစတင်ဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• လူနာများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ COVID-19 နှင့်ဆက်စပ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခံစားရမှုများ သက်သာလျော့ပါးစေရေးအတွက်လည်း ဝန်ကြီးဌာနမှ စိတ်ရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်များ က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• ဘက်စုံမှ အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ရေရှည်ကို မျှော်မှန်း၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ နှင့် ပရဟိတအသင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ အချင်းချင်း Videoconferencing စနစ်ဖြင့် ပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရန်နှင့် ကွန်ရက် တစ်ခုဖြစ်စေရန် အတွက် ဝန်ကြီးဌာနမှ ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Author: MOHSAdmin4 Last modified on Wednesday, 04 Nov 2020